Wararka Maanta: Axad, Sept 27, 2020-15 deegaan oo Gedo ka tirsan oo Is-gaarsiinta ay ka maqantahay
Wararka ayaa sheegaya in isgaarsiinta ay jareen ciidamada Kenya oo howl-gal ka wada xudduudda, waxayna taasi caqabad weyn ku abuurtay shacabka deegannadaas.
Ciidamada la dagaallanka argagaxisada Kenya ayaa deegaanka lagu magacaabo Yadoo ka watay dhowr maalin ka hor 4 ruux, waxaana la sheegay in dib loo helay iyagoo meyd ah oo risaas lagu dilay.
Mudanayaal ka tirsan labada aqal ee Baarlamanka Soomaaliya ayaa shalay arrintaas ka hor sheegay fadhi wada jir ah oo ay lahaayeen Baarlamanka Labada aqal ee Soomaaliya.
Maamulka Jubaland ayaa guddi gaar ah shalay u saaray iney baaritaan ku sameeyaan dilka ka dhacay Gobolka Gedo.
Dowladda Kenya weli kama hadal tacaddiga lagusoo eedeeyay ciidamadooda iyo dilka la sheegay iney u geysteen dad rayid ah .
Abdiaziz Ahmed Barrow Hiiraan Online